Kudzokorodza bepa nemakadhibhokisi marara | Green Renewables
El paperi and the paperboard zvakagadzirwa nematanda, kuwanda kwehuwandu hwepepa nemakadhibhokisi anodyiwa uye nekuwedzera kuparadzwa kwemasango. Kubatsira kwepepa uye kadhibhodhi ndekwekuti zvinokwanisika kuidzosera uye dzokorodza kugadzira mamwe mapepa nemakadhibhokisi.
Inenge 60% yeiyo paperi and the paperboard inodzoreredzwa kuti ishandise zvakare. Kupatsanurwa kwe kavha yemapepa nemakadhibhokisi mumidziyo inobvumira kupora kwavo kuti vazvishandise zvakare uye kugadzira nyowani uye nyowani mapepa paperboard.
Ndokusaka zvakakosha kuzviisa mu midziyo yakakosha kudzivirira kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Kana iro pepa rakadzorerwa rapfuura nenzira yekuchenesa, iyo fiber cellulosic chakatsimbirirwa. Isu tinogadzira marara emarudzi ese zuva nezuva, asi kana tisingakwanise kudzivirira kugadzirwa kwemarara, tinogona kudzora huwandu hwetsvina. zvigadzirwa kudzivirira mashandisiro avo asina basa kana kuashandisazve kusvika pakukwirira.
Nhanho yekutanga mukutonga marara kudzivirira kuzvigadzira. Pese pazvinogoneka, zvigadzirwa zvinofanirwa kusarudzwa zvisina kavha uye pasina mapakeji asina basa. Chikwama kana bhegi rinodzokororwa mhinduro yakanaka kwazvo kudzikisira kushandiswa kwe bolsas yepurasitiki muzvitoro.
ari pukuta kana tauro repepa rinogona kutsiviwa zviri nyore nesiponji kana matauro emapepa. microfiber. Kupesana nekutenda kwakakurumbira, tauro repepa kana zvinyama hazvisi zvishandiswezve. Kamwe ikashandiswa inoonekwa semasara ekupisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Kudzokorodza bepa nemakadhibhokisi marara
Kompositi yakagadzirwa kubva kuminhenga yehuku